Af hayeenka Trump Sarah Sanders oo is casishay - BBC News Somali
Posted at 10:18 14 Jun10:18 14 Jun
Milatariga Maraykanka oo baahiyay "ciidammada Iiraan oo hawlgal fulinaya"
Milatariga Maraykanka ayaa baahiyay muuqaal uu sheegay inuu muujinayo ciidammada sida gaarka ah u tabaran ee Iiraan oo miino aan qarxin ka fujinaya markab shidaalka qaada oo Khamiistii lagu waxyeelleeyay Gacanka Cumaan.
Maraykanka ayaa sidoo kale baahiyay muuqaal muujinaya markabka Japan laga leeyahay ka hor inta aan laga fujin miinada qarxi weyday.
Weerarrada qaraxa ah ayaa sidoo kale lala beegsaday markab Norway laga leeyahay.
Xukuumadda Washington ayaa ku eedaysay Iran inay ka dambeyso weerarradaasi, balse xukuumadda Tehran ayaa si buuxda u beenisay eedeymahaasi.
Qaraxyada ayaa ku soo beegmay bil ka dib markii afar markab oo kuwa shidaalka qaada ah lagu waxyeelleeyay weerarro ka dhacay xeebaha Isutagga Imaaraadka Carabta.
Maraykanka ayaa sidoo kale weerarradaasi ku eedeeyay Iran, walow aanu soo bandhigin caddeyn. Iiraan ayaa dhankeeda beenisay eedeyntaasi.
Xiisadda u dhexeysa Maraykanka iyo Iiraan ayaa aad sare ugu kacday tan iyo markii uu xukunka Maraykanka la wareegay madaxweyne Donald Trump sannadkii 2017.
Trump ayaa ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee uu Obama la galay Tehran, waxaana uu cunaqabateyn dheeraad ah ku soo rogay Iiraan.
Sicirka shidaalka ayaa boqolkiiba afar sare u kacay ka dib dhacdadii shalay.
Gacanka Cumaan ayaa waxaa sannadkiiba mara saddex meelood meel guud ahaan shidaalka lagu safriyo badaha caalamka.
Hoos ka daawo muuqaalka.
Video caption: Gulf of Oman tanker attacks: US video shows 'Iran removing mine'Gulf of Oman tanker attacks: US video shows 'Iran removing mine'
Haweeneydii Aqalka Cad ee Mareykanka u qaabilsaneyd dhanka warbaahinta Sarah Sanders ayaa shaqada ka tegeysa, sida uu shaaciyay madaxweyne Donald Trump.
Wuxuu sheegay in afhayeenkiisa ay dhammaadka Bishan dib ugu laaban doonto gobolka ay ka soo jeeddo ee Arkansas, isagoo ku ammaanay inay tahay "geesiyad".
Sarah oo ah qofkii ugu dambeeyay ee jago sare ka hayay Aqalka Cad ee is casilay, ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsaneyd shaqadeeda.
Sumcaddeeda ayaa su`aal la geliyay, iyadoo intii ay xilka haysay lagu eedeeyay in si aan habbooneyn ay ula dhaqantay warbaahinta marka shirarka jaraa`id la qabanayo.
Waxay markii hore ahayd ku xigeenkii xoghayaha warbaahinta kahor inta aysan beddelin Sean Spicer bishii Luulyo ee sannadkii 2017.
Sarah oo 36 jir ah, ayaa loo arkay inay tahay qof daacad u ah Trump, iyadoo lagu yiqiin inay mar walba tiraahdo "Ilaahay ayaa Donald Trump u doortay inuu noqodo madaxweyne".
Trump ayaa haweeneydan ku tilmaamay inay tahay "Qof qiime leh, oo ah haweeney aad iyo aad u wanaagsan".
"Waa geesiyad, dhammaanteen geesiyaal baa nahay, waa inaan geesiyaal noqonnaa," ayuu Trump intaasi sii raaciyay.
Madaxweynaha ma uusan magacaabin qof beddela Sanders.
Waxay cod aan degganeyn ku tiri: "Tani waa wax aan weligey ku faani doono. Waxaan ka sii mid ahaan doonaa dadka aan gabban ee daacadda u ah madaxweynaha."
Posted at 9:06 14 Jun9:06 14 Jun
Internetka oo wali ka maqan Itoobiya
Maalintii afraad ayuu internerku ka maqan yahay dalka Itoobiya, inkastoo qaybo ka mid ah Talaadadii iyo iyo Arbacadii uu si ku meelgaar ah u soo noqday, balse Khamiistii siduu u baxay ayuu illaa iyo hadda ku maqan yahay
Waxaa sidoo kale wali maqan adeeggii fariimaha gaaban la isugu dirayay.
Dadka ayaa isla dhex maray in arrintan loola jeedo sidii looga hortagi lahaa in la qisho imtixaanka, balse dawladdu ma xaqiijin.
Arbacadiina telefeshinka Dawladda ee ETV ayaa ku warramay in la qabtay afar arday oo qishayay iyaga oo jawaabo isugu dirayay fariinta gaaban.
Posted at 8:47 14 Jun8:47 14 Jun
Ninkii weerarka argagixiso ku qaaday masaajidyada Christchurch oo maxkamad ka soo muuqday
Ninkii lagu eedeeyay weerarkii argagixisada ee lagu qaadday masaajidyada magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa diiday dhammaan sagaashan iyo labadii dacwadood ee lagu soo oogay.
Brenton Harrison Tarrant ayaa ka soo muuqday shaashad taalla maxkamadda sare ee magaalada Christchurch.
Wuxuu diiday konton iyo kaw dacwadood oo dil ah iyo afartan dacwadood oo isku day dil ah iyo hal dacwad oo fal argagixisanimo ah.
Lifaaqan ka akhriso xogta dadkii lagu laayay weerarkii masaajidda?
Posted at 6:34 14 Jun6:34 14 Jun
Milatariga Suudaan “oo ka shalaayay khalad” uu dibad baxayaasha ku sameeyay
Ka dib toban maalmood oo si isa soo taraysa loo cambaaraynayay hoggaamiyeyaasha milatariga Suudaan ayaa sheegay “in ay ka xun yihiin khaladkii ka dhacay” intii ay wadeen hawlgalka ay ku sifaynayeen mudaaharaadayaasha fariisinka samaystay.
Balse waxay u muuqataa in shalaytadaasi aysan gaarsiisnayn heer ay ku ogolaan karaan in la sameeyo baaritaan caalami ah oo madax bannaan.
Taas badalkeedana milatarigu wuxuu sheegay in ay soo bandhigi doonaan baaritaan ay si madax bannaan u sameeyeen, isla markaasna ay xireen qaar ka mid ah askarta.
Mucaaradka iyo qaar badan oo ka mid ah beesha caalamka ayaa ka shakisan in wax la qarinayo.
Waxaa jira dadaalo dublamaasiyadeed oo ay ku lugleeyihiin Maraykanka iyo Midawga Africa si loo gaaro xal siyaasadeed awooddana loogu wareejiyo xukuumad rayid ah.
Posted at 6:29 14 Jun6:29 14 Jun
Kulanti wanaagsan akhyaarta halkan naga daalacataay kuna soo dhawaada tabinta tooska ah een ku samaynayno wararka Soomaalida iyo kuwa caalamka.
Waa maalin Jimce ah oo taariikhdu tahay 14 bisha Juunyo sannadka 2019.
Posted at 12:55 13 Jun12:55 13 Jun
Xildhibaannada haweenka ah oo caro awgeed uga baxay Baarlamaanka Kenya oo kulan xasaasi ah leh
Baarlamaanka KenyaImage caption: Baarlamaanka Kenya
Dhammaan xildhibaannada dumarka ah ee ku jira Baarlamaanka Kenya ayaa maanta isaga baxay aqalka, iyadoo uu socday kulan muhiim ah oo ku saabsan miisaaniyad sanadeedka dalka.
Tallaabadan ayey mudanayaasha ku muujinayeen carada ay ka qaadeen weerar gacan qaad ah oo maanta loo geystay haweeneyda baarlamaanka u matashada Dumarka ismaamulka Wajeer Faadumo Geeddi.
Falka lagu weeraray xildhibaanadda ayaa lagu eedeeyay mudane kale oo ka tirsan baarlamaanka, oo isagana laga soo doortay Wajeer.
Rashid Amin, oo ah xildhibaanka bariga Wajeer ayaa lagu eedeeyay inuu Faadumo Geeddi ugu gacan qaaday dhismaha baarlamaanka gudihiisa.
Wararka ayaa sheegaya in Mr Amin uu xildhibaan Faadumo ku eedeeyay inaysan deegaankiisa wax dhaqaale ah u qoondeynin, maadaama ay ka mid tahay guddiga miisaaniyadda ee Baarlamaanka.
Posted at 12:35 13 Jun12:35 13 Jun
Soomaaliya oo Midowga Yurub la saxiixatay heshiiska maalgalinta dhismaha waddooyinka
Heshiiska maalgalinta dhismaha waddooyinkaImage caption: Heshiiska maalgalinta dhismaha waddooyinka
War saxaafadeed ay Xukuumadda Soomaaliya maanta kasoo saartay arrintan ayaa u qornaa sidan:
Ra'iisul wasaare ku xigeenka SoomaaliyaImage caption: Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya
Mashruuca dib udhiska waddooyinka goballada Soomaaliyaayaa qayb ka qaadanaya sare u qaadidda awoodda hay’adaha dhismaha waddooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad gobaleed. Mashruuca ayaa dib udhis loogu sameynayaa, looguna dayac tirayaa 355 kilomitir oo kamid ah waddooyinka isku xira dalka. Dhismaha waddooyinka dalka ayaa noqonaya laba guul oo la gaaray: ma aha oo kaliya in uu badbaadinayo nafta dadka isticmaala ee sidoo kale waxa ay saamayn wanaagsanku yeelanayaa kobaca dhaqaalaha dalka, maadaama waddooyinku fududaynayaan isku xirka ganacsiga gudaha dalka iyo waddamada deriska ah; Ethiopia iyo Kenya, uuna ka qayb qaadanayo shaqo abuurka dhallinyarada Soomaaliyeed ee shaqa la’aantu hayso.
''Dowladda Federaalku waxa ay si xooggan u bogaadinaysaa taageerada jooogtada ah ee midawga Yurub ay siiyaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Taageeradaan 42-da Milyan ee Yuuro ah ee dib udhiska waddooyinka waxa ay sii xoojinaysaa 100-kii Milyan ee Yuuro oo dhawaan Midawga Yurub ku taageeray kabka miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya.'' Ayuu yiriWasiirJamal Maxamed Xasan.
Intii lagu guda jiray munaasabadda,Mr. Nicolas Berlanga Martinezayaa yiri, “Midawga Yurub iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay si wadajir ah ugu faraxsanyihiintaageeradaan 42-ka milyan ee Yuuro ah oo lagu dayactirayo waddooyinka muhiimka ah ee dalka ay sare u qaadayso kobaca dhaqaalaha dalka iyo gobalka, ayna ka tarjumayso faa’iidada bulsho ee ugu jirta dadka Soomaaliyeed. Xaqiiqdii, hagaajinta bad-baadada waddooyinku waxa uu saameyn wanaagsan ku yeelanayaa shaqo abuurka, gaaridda goobaha caafimaad, adeegyada waxbarasho iyo bulsho ee laf-dhabarta u ah la dagaallanka saboolnimada.’’
Safiirka midowga Yurub ee SoomaaliyaImage caption: Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya
Mashruuca dib udhiska waddooyinka goballadda Soomaaliya ayaa hadafka laga leeyahay waxa uu yahay in la suura geliyo hannaan dhaqaalaha dalka lagu kobciyo, lana dhiirri geliyo is-dhex-galka gobalka iyo waddamada deriska. Dhaqaalaha guud ee deeq bixiyaashu ugu tala galeen mashruuca ayaa ah 59.75 Mliyan Oo Yuuro.Dhaqaalaha ayaa ka kooban 42 Milyan oo ka timid Midawga Yurub, 12.31 Milyan oo ka timid snaduuqa horumarinta Afrika, 3.5 Milyan oo ay bixinayso dowladda Soomaaliya, 1.94 Milyan oo ka imaanaysa NEPAD-IPPF.Bangiga horumarinta Afrika iyo wasaaradaha ay qusayso ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa fulinaya mashruuca.
Mashruucan ayaa lagu maalgalin doonaa dhismaha waddooyinkaImage caption: Mashruucan ayaa lagu maalgalin doonaa dhismaha waddooyinka
Posted at 11:21 13 Jun11:21 13 Jun
Maraakiib shidaal wada oo la weeraray
FREDERICK A TERRY/ARTJOM LOFITSKICopyright: FREDERICK A TERRY/ARTJOM LOFITSKI
Waxaa aad sare ugu kacay qiimaha naaftada adduunka ka dib markii labo markab oo ah kuwa ay ku rakibanyihiin haamaha shidaalka lagu dhaamiyo lagu waxyeeleeyay weerar ka dhacay gacanka Cumaan.
Waxaa la sheegay in labada markab ay soo dalbadeen caawimaad iyaga oo sheegay in weerar lagu soo qaaday, shaqaalihii saarnaa ayaana la daad gureeyay.
Wali ma cadda cidda gaysatay weerarradan iyo qaabka loo fuliyay toona.
Balse arrintan ayaa ka dhacday marin muhiim u ah maraakiib wada shidaal aad u badan oo dunida laga isticmaalo.
Waxayna ku soo aadaysaa iyadoo xiisad aad u sarraysa ay ka taagan tahay gobolkaas.
Dawladda Maraykanka ayaa dhawaan sii adkaysay cunaqabataynnadii ay saartay Iiraan, waxayna xoojisay ciidammadii ka joogay gacanka.
Arrintaas ayaana dhacday ka dib markii la sheegay in afar markab lagu qaaday weerarro minjo xaabin ah, arrintaas oo dawladda Maraykanku ay ku eedaysay Iiraan.
Waxayna u badan tahay in weerarradan u dambeeyayna uu uga shakiyi doono isla Iiraan.
Posted at 11:03 13 Jun11:03 13 Jun
Gabadh Soomaali ah oo ka tirsan baarlamaanka Kenya "oo loo gacan qaaday"
Fadumo Gedi/FACEBOOKCopyright: Fadumo Gedi/FACEBOOK
Gabadh Soomaali ah oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa loogu qacan qaaday dhismaha baarlamaanka, sida ay ku warrantay warbaahinta Kenya.
Xildhibaan Rashiid Qaaasim oo laga soo doorto bariga Wajeer ayaa la sheegay in uu dharbaaxay Faadumo Geedi oo ka tirsan baarlamaanka.
Baarlamaanka Kenya ayaa maanta ka doodaya miisaanniyad sanadeedka dalka iyo qoondooyinka ay gobolladu kala heli doonaan.
Rashiid Qaasim ayaa ku eedeeyay xildhibaanadda inay ku guuldareysatay inay lacagaha qoonddada ah ugu hagar bixi wayday deeegaanka laga soo doorto isaga.
Faadumo Geedi waxay ka tirsan tahay guddiga qoondeyda misaaniyadda baarlamaanka Kenya, waxay kamid aheyd xubno dhawaan booqasho ku tegay bariga Wajeer oo ah goobta laga soo doorta ninkaas, sida uu ku warramay wargeyska Daily Nation.
Waxaa baraha bulshada lagu arkayay sawirro aysan BBC-du si madax bannaan u xaqiijin karin oo lagu sheegay in xildhibaanadda ooyaysa dhacdadan ka dib.
Posted at 9:35 13 Jun9:35 13 Jun
Suudaan oo u yeertay safiirka UK hadal uu yiri dartii
Suudaan ayaa u yeertay safiirka Britain u fadhiya Khartuum Irfan Siddiq, iyadoo ka cabanaysa hadal ka soo baxay dawladda Britain oo ku saabsan mashaakilka ka taagan dalka, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee dawladda Suudaan oo magaceeda loo soo gaabiyo Suna.
Safiirka Britain Irfan Siddiq ayaa toddobaadkii hore Twitterka ku soo qoray walaaca uu ka qabo laamaha ammaanka ka dib markii ay isku dayeen in ay kala eryaan fariisinka mudaaharaadayaasha.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suudaan uu wakaaladda wararka ee Suna u sheegay in wasaaraddu ay ka cabatay Twitterkii uu soo qoray safiirka isla markaasna ay ka soo horjeeddo “dabeecadihii caadiga ahaa ee dublamaasiyadda”.
Dhakhaatiirta ayaa sheegay in rabshadihii u dambeeyay ay ku dhinteen 118 ruux, halka dawladdu ay ka sheegtay in dhimashadu ay intaas ka yartahay iyada oo sheegtay in ay ku dhinteen 61 ruux.
Laamaha ammaanka ayaa rasaas ku furay dad mudaaharaadaya oo dalbanaya in milatarigu uu xukunka ku wareejiyo xukuumad rayid ah.
Milatariga ayaa bishii Abriil xukunka ka maroorsaday madaxweynihii muddada dheer xilka hayay Cumar Xasan Al Bashiir.
Posted at 6:51 13 Jun6:51 13 Jun
Fariimaha gaaban oo ka xaniban Itoobiya
Dadka ku sugan dalka Itoobiya ayaan awoodin in ay fariimaha gaaban isu diraan, ka dib markii uu adeeggaasi meesha ka baxay, sida uu ku soo warramayo wariyaha BBC Kalkidan Yibeltal oo ku sugan magaalada Addis Ababa.
Warkan ayaa yimid iyadoo dalkaasi uu ku jiro maalintii saddexaad ee khadku uu tagayo.
Khadka ayaa si ku meel gaar ah u maqnaa Talaadadii iyo Arbacadii.
Fariimaha la xannibay ayaa ku soo aadday iyadoo ay socdaan imtixaannadii qaranka ee dugsiyada sare.
Posted at 6:18 13 Jun6:18 13 Jun
Tanzania oo si wayn ugu diyaargarawday ladagaalanka cudurka Ebola
Dadka reer Tanzania “ma aha in ay ka walwalaan” faafidda cudurka Ebola, ayuu yiri wasiirka caafimaadka ee dalkaas Ummy Mwalimu isaga oo ka jawaabaya warka ku saabsan in cudurka Ebola uu soo gaaray dalka Uganda isaga oo ka soo tallaabay xadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
Tanzania ayaa xad dheer la leh Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo halkaas oo cudurka Ebola uu ku dilay 1,400 oo ruux.
Mwalimu oo Twitterka fariin soo dhigay ayaa sheegay in Tanzania ay aad isugu diyaarisay la dagaalanka caabuqa.
Posted at 5:53 13 Jun5:53 13 Jun
Itoobiya oo mar kale internet la’aan ah
Waxay u muuqataa in ay joogto noqotay in internet uu ka go’o dalka Itoobiya, iyadoo dadku ay khad la’aan yihiin maalintii saddexaad ee xiriir ah.
Khad la’aantii internetka ee Talaadadii iyo Arbacadii ayaa ahaa kuwo ku meelgaar ah.
Arrintan ayaana ku soo aaday iyadoo imtixaanaadka qaranka ee iskuulladu uu socdo, dadka ayaana isla dhex maray in dawladdu ay khadka u jartay si ay uga hortagto qishka imtixaanka.
Shirkadda isgaarsiinta ee Ethio Telecom oo ah midda kali ah ee internetka dalkaas bixisa ayaa laanta Afka Amxaariga ee BBC u sheegay in aysan ruqsad u haysan in ay ka hadlaan arrinta internetka.
Posted at 3:36 13 Jun3:36 13 Jun
Nin arday Muslimiin ah laayay oo la xukumay
Craig HicksImage caption: Craig Hicks
Nin saddex arday oo Muslimiin ah ku dilay meel u dhaw jaamacadda University of North Carolina sannadkii 2015 ayaa lagu xukumay xabsi cimri daa’in ah.
Craig Hicks ayaa toogasho ku dilay Deah Baraka oo 23 jir ahaa iyo Yusor Mohammad oo 21 jir ahayd, dhallinyaradaas ayaana ahayd lamaane wax yar uun ka hor is guursaday.
Wuxuu sidoo kale isla wakhtigaas magaalada Chapel Hill ee dalka Maraykanka ku dilay Razan Mohammad Abu-Salha oo ay walaalo ahaayeen gabadha kale taas oo 19 jirtay.
Wuxuu qirtay saddex dambi oo ah dil heerka koobaad ah waxaana lagu xukumay cimrigaa ha ku furto.
Hicks laguma helin dmabiyo nacayb la xiriira, inkastoo qoysaska dhallinyaradaas ay ku adkaysanayaan in loo bartilmaameedsaday diintooda darteed.
Booliiska ayaa sheegay in dilkaasi uu ka dhashay muran ka billawday meel gawaarida la dhigto oo gurigooda ku hortaalla taariikhdu markay ahayd bishii Feebaraayo ee sannadkii 2015.
OUR THREE WINNERS/FACEBOOKCopyright: OUR THREE WINNERS/FACEBOOK
Muuqaal aan horay oo la arag oo taleefan lagu duubay ayaa maxkamadda laga daaray, kaas oo laga arkay Hicks oo wajahaya albaabka guriga Barakat kuna eedaynaya in uu gaariga ka dhigtay booskii uu isagu lahaa.
Muuqaalka ayaa sidoo kale laga arki karaa Barakat oo cod dagan kula hadlaya Hicks. balse Hicks ayaa rasaas furay ka dibna wuxuu toogtay labada gabdhood ee walaalaha ah.
Arbacadii ayuu Hicks sheegay in tan iyo maalintii koobaad uu rabay in uu qirto dambigiisa.
“Hadda ayayse dhacday arrintaas ka dib afar sano, afar bilood iyo labo maalmood markii laga soo wareegay.” ayuu yiri sida ay ku warrantay warbaahinta CNN.
Barakat ayaa sannadkii labaad dhakhtarnimo dhanka ilkaha ah ka baranayay jaamacadda UNC, xaaskiisa Yusor ayaa iyaduna markaas uun ku biirtay iyadoo dhakhtarnimo dhanka ilkaha ah billawday.
Walaasheed Razan ayaa iyaduna naqshadaynta ka baranaysay jaamacadda North Carolina State University.
Dilkan ayaa dhaliyay caro caalami ah, Barack Obama oo markaas madaxweyne ahaa ayaa dilka cambaareeyay wuxuuna ku tilmaamay “mid arxan darro ah oo aad looga caroodo”.
Posted at 3:26 13 Jun3:26 13 Jun
Kulanti wanaagsan akhyaarta halkan naga daalacataay, kuna soo dhawaada tabinta tooska ah een ku samayno wararka Soomaalida iyo kuwa caalamka.
Waa maalin Khamiis ah oo taariikhdu tahay 13 bisha Juunyo sannadka 2019.
Posted at 12:07 12 Jun12:07 12 Jun
Wiil yar oo xannuunka Ebola ugu dhintay Uganda
Wiil yar oo shan jir ah ayuu xanuunka Ebola ku dilay dalka Uganda, sida ay Twitterka ku soo qortay Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, waxayna soo xigatay wasaaradda caafimaadka.
Cudurkii Ebolaha ee ka jiray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa hadda u tallaabay dhanka Uganda.
Hay’adda caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtayin wiilkan yar uu galbeedka Uganda ka soo galay dhanka dalka Congo.
Posted at 11:35 12 Jun11:35 12 Jun
Afar arday oo la qabtay iyagoo qishaya imtixaanka qaranka ee Itoobiya
Afar arday oo qaadanayay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ayaa la qabtay iyaga oo qishaya imtixaanka isla markaasna adeegsanaya taleefanno, sida uu ku warramay Telefishinka Qaranka
Itoobiya ayaa qaadaysa imtixaanka qaranka iyadoo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan hal milyan oo arday,
Taliyaha booliiska Addis Ababa ayaa sheegay in imtixaanku si nabad ah uga dhacay 77 goobood, balse gacanta lagu dhigay afar arday oo iskudayayay in ay imtixaanka isugu qishaan taleefan.
Maalmihii u dambeeyay labo jeer ayaa la jaray khadka internetka ee Itoobiya, dadka qaarkoodna waxay la xiriiriyeen imtixaanaadka.
Horay ayay Itoobiya u jartay khadkii internetka ee dalkaas oo dhan, iyadoo isku dayaysa in laga hortago in imtixaanaadka la qisho.
Posted at 10:32 12 Jun10:32 12 Jun
Soomaaliya oo abaalmarisay Oradyahanno
Xukuumadda faderaalka ah ee Soomaaliya ayaa munaasabad dhiirigalin ah ugu qabatay dhallinyaro orad yahanno ah oo la sheegay in ay guulo ka soo hoyiyeen tartammo heer sare ah.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa barteeda Facebook soo dhigtay sawirrada xafladda.
Posted at 10:13 12 Jun10:13 12 Jun
Google oo maamuusay qoraa Kenyan ah
Shirkadda Google ayaa maamuustay Atieno Ogola oo ah gabadh qoraa ah oo u dhalatay Kenya balse geeriyootay.
Gabadhan ayaa dhalashadeedii laga joogaa Lixdan sano, shirkadda ayaana sawirkeeda soo galisay meesha ay wax ku qoraan dadka macluumaadka baaranaya.
Ogala ayaa dhimatay sannadkii 2011 waxay ahayd qoraaa heer sare ah, waxayna sidoo kale ahayd dhakhtarad carruur oo madax ka ahayd isbitaalka Cottolengo Hospice oo diiradda saara carruurta ay waalidkood dhinteen ee qaba fayraska HIV iyo cudurka AIDS.